Wasaaradda waxbarashada Puntland oo soo bandhigtay deeqo waxbarasho oo dibadeed. – Radio Daljir
Wasaaradda waxbarashada Puntland oo soo bandhigtay deeqo waxbarasho oo dibadeed.
Seteembar 18, 2011 12:00 b 0
Garowe, Sept 18 – Wasaaradda waxbarashada dawladda Puntland, ayaa maanta soo bandhigtay fursado waxbarasho ee dalka dibaddiisa taasoo ay ka faa?idaysan doonaan ardayda dhammaystay dugsiyada sare iyo dhexe ee Puntland labadii sano ee ugu dambeeyey.
Fursadaan waxbarasho ee wasaaraddu ay soo bandhigtay maanta ayaa lagu shaaciyey shir jaraa?id oo wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdi Faarax Siciid ?Juxa? uu maanta ku qabtay xarunta wasaaradda ee magaalada Garowe, kuna faah-faahiyey jaanista waxbarasho ee dalka dibaddiisa ah iyo hababka looga qayb-gali doono.
Wasiirka ayaa sheegay fursaddaani in ay tahay mid waxbarasho oo ay soo qoondaysay dawladda Turkiga, ayna ka faa?idaysanayaan ardayda dhammaysatay dugsiyada sare iyo kuwa dhexe ee Puntland kuwaasi oo ka qaybgalka furasaddaan u mari doona hab-imtixaam oo ay qaadi doonto isla dawladda Turkiga.
Imtixaan qaadidda ardayda u tartami doonta fursadaha aqoonta dibadeed waxaa ay noqon doonaan labo waji oo imtixaan qaadis ah, waxaana qaybta hore ay ka dhici doontaa magaalada Galkacyo, halka wajiga labaad ee imtixaankaasi uu isna ka dhici doono magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland, imxtixaannaadaasi oo dhici doona maalmaha innagu soo aaddan ee bishaan September.
Deeqdaan waxbarasho ee dawladda Turkiga, laguna soo aaddiyey wasaaradda waxbarashada Puntland ayaa ah mid dhammaan laga fulinayo deegaannada Soomaalida, waxaana maalmo ka hor magaalada Muqdisho tahay saraakiil dhinaca waxbarashada ah oo ka socotay dawladda Turkiga kuwaasi oo hawlo imtixaan-qaadis ah ka sameeyey Muqdisho.
Ma ahan markii ugu horraysay sidaan oo kale deegaannada Puntland looga hirgaliyo qorshayaal deeqo waxbarasho ah oo bannaanka loo qaadayo arday dhammaysatay dugsiyada sare ee Puntland.
Baahin: Isniin, Sept 19, Weriye Maxamed C. Kooshin ~ Daljir ~ Garowe. Wasiirka gaashaandhiga ee Uganda oo booqday fariisimada ciidanka AMISOM ee Muqdisho; Dhakhaatiir & macallimiin ka socda dalka Turkiga oo ku soo wajahan Puntland; Taliyaha ciidanka bilayska ee Puntland oo ka qayb galay shir looga hadlay arrimaha burcad badeeda oo ka dhacay Seychelles.
African Oil oo mashruuc Isbitaal ka fulinaysa degmada Ufeyn ee gobolka Bari.